यी ११ सपनाले अ’शुभको संकेत गर्छ ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकयी ११ सपनाले अ’शुभको संकेत गर्छ !
काठमाडौं- राति सुतेको बेला हरेक मान्छेले सपना देख्ने गर्छन् । बिहान आँखा खुल्दा कतिले सपना स’म्झिएका हुन्छन् त कतिले बिर्सन्छन् । तर हरेकसँग मनमा अ’नेकन त’र्कना हुन्छ । त्यहि त’र्कनाका कारण तपाई सपना देख्नुहुन्छ ।सपनाले जीवनमा घ’ट्ने अनेकौ घट’ना वा कुनै कुराको संकेत गर्दछ भन्ने बिश्वास गरिन्छ ।ज्यो’तिष विज्ञानले भन्छ “सपनाले मानिसको शु’भ/अशुभ बारे पनि अगाडी नै संकेत गर्दछ ।”ज्योतिषीय शास्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले देखेको सपनाले पू’र्वसूचना शुभ अशुभ अनि मिश्रित फल दिने बताइएको छ ।